Thwebula jv16 PowerTools 4.2.0.2009 – Vessoft
WindowsUhleloUkuhlanza nokuthuthukisajv16 PowerTools
Ikhasi elisemthethweni: jv16 PowerTools
I-Wikipedia: jv16 PowerTools
Jv16 PowerTools – iqoqo elikhulu lamathuluzi okulungisa amaphutha bese wenza kahle ikhompyutha. Iwindi eliyinhloko le-software libonisa zonke izinhlobo zamathuluzi atholakalayo ezihlukaniswe ngezigaba. Amathuluzi oyinhloko we-jv16 PowerTools ahlanganisa ukuhlanzwa kwekhompyutha, ukukhipha isofthiwe, ukuphathwa kwe-startup, ukuhlelwa kwesistimu, hlola isofthiwe esengozini, i-antispy, njll. Isofthiwe ihlanganisa isigaba sokuqapha, ukusesha, ukuphatha nokuhlanza ukubhalisa. I-PowerTools i-jv16 ine-module yokuphathwa okuphambili, ukusesha nokuthola amafayela. Futhi, phakathi kwamathuluzi atholakalayo we-software kukhona izindlela zokuphatha ubumfihlo futhi kukhona isethi yamasevisi engeziwe okulungiselelwa. I-jv16 I-PowerTools ikuvumela ukudala izithombe zamathuluzi esofthiwe ngamanye kwideskithophu noma ku-Imenyu yokuqala ukuze uthole ukufinyelela okusheshayo.
Ukuhlanza nokulungisa amaphutha wesistimu
Isofthiwe ephelele khipha
Thwebula jv16 PowerTools
Amazwana ku jv16 PowerTools
jv16 PowerTools software ehlobene
I-MJ Registry Watcher – isofthiwe yokuqapha nokubika ngokuba khona kwamajikijiki ezinkingeni, amanani wokubhalisa, amafayela wokuqalisa, nezinye izindawo zokubhalisa noma amafayela wesistimu.
Lesi yisikhathi sokubala ngokubuka okubonakalayo kwewashi lesithombe futhi ikhono lokusetha isikhathi sokuqala ngaphakathi kwesibili.